:: My Little World ::: Weekend - Kdrama
Posted by Nay Nay Naing at 2/27/2010 11:44:00 PM
စလိုံ့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ တစ်ခါက ရနိန်ကုန်ပြန်တာ ဆယ်ရက်မှာလေးရက် ကိုးရီးယားးကားကြည့်ပြီးပြန်လာတယ်။
The Woman Who Still Wants To Marry ကို viikii ကြည့်မရလို့ link လိုက်ရှာနေတာ ခုတော့ ကြည့်လို့ရပြီ ကျေးဇူးဘဲ မနေနေနိုင်
thanksalot . peace out!
Saturday, May 22, 2010 1:36:00 PM